ဗီတာမငျစီက ရာသီ(ဓမ်မတာ)အပျေါသကျရောကျစသေလား??? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီတဈခေါကျတော့ယောကျြားလေးတှနေဲ့တိုကျရိုကျမသကျဆိုငျပဲ မိနျးကလေးတှနေဲ့သာ သကျဆိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာလေးဖွဈသှားပွီ။ ယောကျြားလေးတှကေ ရာသီမှမလာပဲလနေော့။ ယောကျြားလေးတှနေဲ့က တိုကျရိုကျသာ မသကျဆိုငျပမေယျ့ သှယျဝိုကျပွီးတော့ သကျဆိုငျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိမိ၏ဇနီး၊ခဈြသူရဲ့ ဓမ်မတာလာစဉျဖွဈပျေါတတျတဲ့ ခံစားခကျြ၊နာကငျြကိုကျခဲမှုအခြို့နဲ့ စိတျမကွညျမလငျဖွဈမှုတှဟော အမြိုးသားတှအေပျေါမှာပါ သကျရောကျမှုရှိလို့ပါ။ ဒီလိုအခြိနျတှမှော စိတျထိခိုကျ/စိတျအလိုမကဖြွဈလှယျတာ၊ရာသီကွောငျ့ကိုကျခဲတတျတာတှကွေောငျ့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့မိမိရဲ့ခငျပှနျး၊ခဈြသူအပျေါမှာ သညျးမခံနိုငျတာ၊ဝမျးနညျး ဒေါသထှကျလှယျတာတှဖွေဈလရှေိ့ပါတယျ။
ဒါကို အမြိုးသားတှအေနနေဲ့ နားလညျသဘောပေါကျပွီး နှဈသိမျ့ဆကျဆံပေးဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
ရာသီ(ဓမ်မတာ)လာရငျ ဘာတှဖွေဈတတျသလဲ??? မိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတူနိုငျပါဘူး။ အခြို့က ဘာမှသိပျမသိသာလိုကျပဲပွီးသှားတာရှိသလို အခြို့ကတြော့လဲအားနညျးနုံးခြိတာ၊မောပနျးနှမျးနယျတာ၊နာကငျြကိုကျခဲတာ၊မစားမသောကျခငျြတာ၊စိတျတိုဒေါသဖွဈ၊ဝမျးနညျးလှယျတာတှထေိ ဖွဈတတျပါတယျ။
တဈခြို့မိနျးကလေးတှဆေို အတေျာ့ကိုနမေထိထိုငျမသာဖွဈလောကျအောငျ ကိုကျခဲတတျကွပါတယျ။
ဗီတာမငျစီဟာ ရာသီအပျေါဘယျလိုသကျရောကျမှုရှိသလဲ??? သကျရောကျမှုအခြို့ကတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ…
အမြိုးသမီးမြားရာသီမလာခငျအခြိနျမှာ estrogen ဟျောမုနျးဟာသဘာဝအတိုငျးထှကျလာပါတယျ။ သူ့ရဲ့ရညျရှယျခကျြက မြိုးအောငျခဲ့ပါကမြိုးဥကပျနိုငျအောငျ သားအိမျနံရံကိုအားကောငျးပွီးထူထဲလာစတောဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ estrogen ကွောငျ့မို့ ရာသီမလာခငျကိုကျခဲခွငျး၊ရငျသားမြားတငျးခွငျး၊ခေါငျးကိုကျခွငျး၊စိတျကခြွငျးမြားကိုတဈခါတဈရံဖွဈစတေတျပါတယျ။ ဗီတာမငျစီဟာ estrogen ဟျောမုနျးကိုမြှတစပွေီး အထကျပါပွဿနာတှကေိုသကျသာစနေိုငျပါတယျ။
estrogen နဲ့တညျဆောကျလာခဲ့တဲ့ သားအိမျနံရံဟာ မြိုးဥမအောငျခွငျး(သို့)သုတျပိုးနဲ့မတှဖွေ့ဈတဲ့အခါမှာ ကှာကသြှားပါတယျ။ ဒီလို မြိုးမအောငျတဲ့ မမြိုးဥရယျ၊သားအိမျနံရံကသှေးကွောလေးတှရေယျ ကှာကတြာကို ရာသီလာတယျချေါပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ကိုကျခဲခွငျး၊အစားအသောကျပကျြခွငျး၊ပြို့အနျခွငျး၊အိပျမပြျောခွငျးမြားဖွဈတတျပါတယျ။ ဗီတာမငျစီက ဟျောမုနျးမြားအတကျအကကြို ထိနျးညှိပေးပွီး အဆိုပါလက်ခဏာမြားကို လြော့နညျးစပေါတယျ။
ဆေးပညာရှငျတှရေဲ့ အဆိုအရဓမ်မတာမလာခငျ(၅)ရကျလောကျကွိုပွီး ဗီတာမငျစီကို တဈရကျ ၇၅၀ မီလီဂရမျသောကျသုံးပေးပါက ရာသီလာစဉျနာကငျြကိုကျခဲခွငျးကိုသကျသာစတေယျလို့ဆိုပါတယျ။ ရာသီမလာခငျ (၅)ရကျအလိုမှသညျ ရာသီရပျသှားခြိနျအထိသောကျရမှာဖွဈပါတယျ။
၃။ရာသီမမှနျခွငျးကို သကျသာစခွေငျး၊ရာသီသှေးမြားခွငျးကို သကျသာစခွေငျး။
ဗီတာမငျစီဟာ သားအိမျမှာရှိတဲ့သှေးကွောလေးတှကေို တောငျ့တငျးသနျမာစရေုံမက အမြိုးသမီးမြိုးပှားစနဈကိုပါအားကောငျးစတောကွောငျ့ ရာသီမမှနျခွငျးကို လြော့နညျးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သှေးဆငျးတာမမြားရအောငျပါ ထိနျးညှိပေးနိုငျပါတယျ။ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ဗီတာမငျစီတဈရကျ ၁၅၀၀ မီလီဂရမျသောကျသုံးပါက ရာသီကွောငျ့ဖွဈတတျတဲ့ပွဿနာတှကေို သကျသာလြော့ပါးစတေယျလို့ဆိုပါတယျ။
၄။ရာသီလာစဉျဆုံးရှုံးသှားသော သံဓါတျအားပွနျလညျဖွညျ့တငျးရာတှငျ သံဓါတျစုပျယူမှုကိုအားပေးခွငျး။
ဓမ်မတာလာစဉျ သှေးနဲ့အတူဆုံးရှုံးသှားသော သံဓါတျကွောငျ့ မောပနျးနှမျးနယျခွငျး၊အားနညျးခွငျးမြားဖွဈတတျပါတယျ။ ရာသီအရမျးမြားရငျ သံဓါတျဆုံးရှုံးမှုကွောငျ့ သှေးအားနညျးရောဂါကိုတောငျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျစီဟာ သံဓါတျအားဆေး(သို့)သံဓါတျပေါကွှယျဝသော အစားအစာမြားစားရာတှငျ အစာအိမျအူလမျးကွောငျးမှ သံဓါတျစုပျယူခွငျးကို မြားစှာပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ ဗီတာမငျစီ လုံလောကျစှာစားသုံးခွငျးက သံဓါတျစုပျယူမှုကိုအားကောငျးစပွေီး သံဓါတျခြို့တဲ့ခွငျးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ သှေးအားနညျးရောဂါကိုပါ သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
အခုပွောပွပေးသှားတာတှကေတော့ ရာသီ(ဓမ်မတာ)အပျေါ ဗီတာမငျစီရဲ့သကျရောကျပုံတှပေဲဖွဈပါတယျ။
အမြိုးသမီးမြား အာဟာရပွညျ့ဝ ကနျြးမာလှပနိုငျကွပါစေ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးဖြစ်သွားပြီ။ ယောကျာ်းလေးတွေက ရာသီမှမလာပဲလေနော့။ ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့က တိုက်ရိုက်သာ မသက်ဆိုင်ပေမယ့် သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိမိ၏ဇနီး၊ချစ်သူရဲ့ ဓမ္မတာလာစဉ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ခံစားချက်၊နာကျင်ကိုက်ခဲမှုအချို့နဲ့ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်မှုတွေဟာ အမျိုးသားတွေအပေါ်မှာပါ သက်ရောက်မှုရှိလို့ပါ။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ စိတ်ထိခိုက်/စိတ်အလိုမကျဖြစ်လွယ်တာ၊ရာသီကြောင့်ကိုက်ခဲတတ်တာတွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ခင်ပွန်း၊ချစ်သူအပေါ်မှာ သည်းမခံနိုင်တာ၊ဝမ်းနည်း ဒေါသထွက်လွယ်တာတွေဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကို အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး နှစ်သိမ့်ဆက်ဆံပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ရာသီ(ဓမ္မတာ)လာရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ??? မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူနိုင်ပါဘူး။ အချို့က ဘာမှသိပ်မသိသာလိုက်ပဲပြီးသွားတာရှိသလို အချို့ကျတော့လဲအားနည်းနုံးချိတာ၊မောပန်းနွမ်းနယ်တာ၊နာကျင်ကိုက်ခဲတာ၊မစားမသောက်ချင်တာ၊စိတ်တိုဒေါသဖြစ်၊ဝမ်းနည်းလွယ်တာတွေထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေဆို အတော့်ကိုနေမထိထိုင်မသာဖြစ်လောက်အောင် ကိုက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။
ဗီတာမင်စီဟာ ရာသီအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲ??? သက်ရောက်မှုအချို့ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်…
အမျိုးသမီးများရာသီမလာခင်အချိန်မှာ estrogen ဟော်မုန်းဟာသဘာဝအတိုင်းထွက်လာပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က မျိုးအောင်ခဲ့ပါကမျိုးဥကပ်နိုင်အောင် သားအိမ်နံရံကိုအားကောင်းပြီးထူထဲလာစေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် estrogen ကြောင့်မို့ ရာသီမလာခင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ရင်သားများတင်းခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊စိတ်ကျခြင်းများကိုတစ်ခါတစ်ရံဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ estrogen ဟော်မုန်းကိုမျှတစေပြီး အထက်ပါပြဿနာတွေကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
estrogen နဲ့တည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ သားအိမ်နံရံဟာ မျိုးဥမအောင်ခြင်း(သို့)သုတ်ပိုးနဲ့မတွေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကွာကျသွားပါတယ်။ ဒီလို မျိုးမအောင်တဲ့ မမျိုးဥရယ်၊သားအိမ်နံရံကသွေးကြောလေးတွေရယ် ကွာကျတာကို ရာသီလာတယ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုက်ခဲခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီက ဟော်မုန်းများအတက်အကျကို ထိန်းညှိပေးပြီး အဆိုပါလက္ခဏာများကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရဓမ္မတာမလာခင်(၅)ရက်လောက်ကြိုပြီး ဗီတာမင်စီကို တစ်ရက် ၇၅၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးပေးပါက ရာသီလာစဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကိုသက်သာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရာသီမလာခင် (၅)ရက်အလိုမှသည် ရာသီရပ်သွားချိန်အထိသောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ရာသီမမှန်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း၊ရာသီသွေးများခြင်းကို သက်သာစေခြင်း။
ဗီတာမင်စီဟာ သားအိမ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေကို တောင့်တင်းသန်မာစေရုံမက အမျိုးသမီးမျိုးပွားစနစ်ကိုပါအားကောင်းစေတာကြောင့် ရာသီမမှန်ခြင်းကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးဆင်းတာမများရအောင်ပါ ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဗီတာမင်စီတစ်ရက် ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးပါက ရာသီကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေကို သက်သာလျော့ပါးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၄။ရာသီလာစဉ်ဆုံးရှုံးသွားသော သံဓါတ်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းရာတွင် သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုအားပေးခြင်း။
ဓမ္မတာလာစဉ် သွေးနဲ့အတူဆုံးရှုံးသွားသော သံဓါတ်ကြောင့် မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊အားနည်းခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရာသီအရမ်းများရင် သံဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါကိုတောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ သံဓါတ်အားဆေး(သို့)သံဓါတ်ပေါကြွယ်ဝသော အစားအစာများစားရာတွင် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမှ သံဓါတ်စုပ်ယူခြင်းကို များစွာပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဗီတာမင်စီ လုံလောက်စွာစားသုံးခြင်းက သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုအားကောင်းစေပြီး သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါကိုပါ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အခုပြောပြပေးသွားတာတွေကတော့ ရာသီ(ဓမ္မတာ)အပေါ် ဗီတာမင်စီရဲ့သက်ရောက်ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ အာဟာရပြည့်ဝ ကျန်းမာလှပနိုင်ကြပါစေ။
မပေါ့ဆသငျ့တဲ့ ပွသနာတဈခု – ဒေါကျတာ ဖွိုးသီဟ